DEER HUNTER 2018 5.1.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.1.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ DEER HUNTER 2018
DEER HUNTER 2018 ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သမင် Hunter 2014 ခုနှစ်ဖန်တီးသူထံမှ! ကမ္ဘာ့အကြီးမြတ်ဆုံးအမဲလိုက်အတှေ့အကွုံအတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ရိုင်းများနှင့်အမဲလိုက်ခြင်းသို့ပြန်သွားသည်။
Alaska ကနေဇင်ဘာဘွေရန်ကမ္ဘာလုံး span ကြောင့်ထူးခြားလှပသောနေရာဆုဖလားမှီအောင်လိုက်လော့။
အိတ် BIG GAME Animation
သူတို့နီးပါးမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်ခုန်နိုင်အောင်စစ်မှန်သော Hunt ကတိရိစ္ဆာန်များ! နှိမ့်ချကိုခြေရာခံများနှင့်အိတ်ကမ္ဘာ့အများဆုံးထူးခြားဆန်းပြားနှင့်တွေ့ရခဲသောဂိမ်း။
တစ်ဦးက Pro လိုအညွန့်
သူတို့သည်သင့် GET ရှေ့တော်၌ GET
Google ကအတူအကြီးမားဆုံးတိရိစ္ဆာန်များအောင်မြင်မှုများနှင့်ဦးဆောင် Play အခွင့်အရေးနှင့်အိတ်ကွှားပွောများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်!
စုဆောင်းနဲ့ Scope, မဂ္ဂဇင်းများစည်, သင်တစ်ဦးချင်းစီအမဲလိုက်ခြင်းအဘို့သင့်လက်နက်များစုံလင်အဖြစ်စတော့ရှယ်ယာနှင့်သင်၏သေနတ် customize ။
ယနေ့အမဲလိုက်ခြင်း join - ဒါဟာပွင့်လင်းရာသီရဲ့!
သမင်ဒရယ် Hunter 2018 ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အချို့ကိုသင်အပိုပစ္စည်းများအဘို့ကိုမှန်ကန်ပိုက်ဆံဆပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဤလျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုခြင်းအသုံးပြုခြင်း၏ Glu Mobile ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအားဖြင့်အုပ်ချုပ်သည်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏စုစည်းမှုနှင့်အသုံးပြုမှု Glu Mobile ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ နှစ်ဦးစလုံးမူဝါဒများ www.glu.com မှာရရှိနိုင်ပါသည်။ အပိုဆောင်းအသုံးအနှုန်းများကိုလည်းလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
မှာ Us Follow
DEER HUNTER 2018 အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DEER HUNTER 2018 အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DEER HUNTER 2018 အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DEER HUNTER 2018 အား အခ်က္ျပပါ
sandro797 စတိုး 94.56k 34.29M
DEER HUNTER 2018 ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DEER HUNTER 2018 အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.1.5
App Name: DEER HUNTER 2018
File Size: 85.88MB
Release date: 2018-12-22 23:33:19
DEER HUNTER 2018 APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ